Maxay yihiin Faa'iidooyinka iyo ROI ee ku-habboonaynta Mashiinka Raadinta? | Martech Zone
Sabti, Febraayo 25, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Markii aan dib u eegay maqaallo duug ah ayaan ku qoray kor u qaadista mashiinka raadinta; Waxaan ogaaday inay hadda toban sano dhaaftay oo aan jihaynta siinayay. Nakhshadeynta mashiinka raadinta ayaa kor u kacday meeshii ugu sarreysay dhowr sano ka hor, warshad balaayiin badan leh oo cirka isku shareertay laakiin markaa ka dhacday nimcadii. In kasta oo la-taliyeyaasha SEO ay meel walba joogeen, inbadan ayaa macaamiishooda u horseeday waddo shaki leh oo ay ku ciyaarayeen mashiinka raadinta halkii ay si fiican ugu isticmaali lahaayeen.
Xitaa waxaan qoray jaangooyada, maqaalka ereyga, intaas SEO wuu dhintay cabsida kuwa ku jira warshadayda. Ma ahayn inaan u maleynayay in makiinadaha raadinta ay dhinteen, waxay sii wadeen inay kordhiyaan ku-xirnaanshaha iyo saameynta xeeladaha suuq-geynta dijitaalka shirkadaha. Taasi waa in warshaduhu ay dhinteen, iyagoo lumiyay wadadooda. Waxay joojiyeen inay diirada saaraan suuq geynta iyo, taa badalkeed, waxay diirada saareen algorithms waxayna isku dayayaan inay khiyaameeyaan jidkooda xagga sare.
Maalin kasta, waxaan helaa codsiyo weydiisanaya, dawarsanaya, ama xitaa raba inaan bixiyo dib-u-dhigashada. Waa waali tan iyo markii ay muujineyso ixtiraam la'aan buuxda bulshada aan u shaqeeyay si loo dhiso qiime iyo kalsooni tobankii sano ee la soo dhaafay. Uma dhigi doono taas mid khatar ku ah darajada qof walba.
Taas macnaheedu maahan inaanan wali ka walwalin naftayda inaan sii haayo boggeyga makiinadaha raadinta ama kuwa macaamiishayda. Raadinta mashiinka raadinta ayaa sii wada inay aasaas u ahaato mid kasta oo ka mid ah dadaalkeenna macaamiishayada, yar iyo weyn.
Harris Myers ayaa soo saaray macluumaadkan, SEO: Maxay ganacsigaagu ugu baahan yahay hadda?, taas waxaa ka mid ah lix sababood oo ay tahay in ganacsi kastaa u yeesho istiraatiijiyad goobitaan dabiici ah.
Khibradda khadka tooska ahi waxay ku bilaabmaysaa raadinta - 93% macaamiisha maanta waxay adeegsadaan mashiin raadin si ay u raadiyaan wax soo saar iyo adeegyo
SEO waa qiimo jaban - 82% dadka suuqleyda ah waxay u arkaan SEO inuu noqonayo mid waxtar badan leh, iyadoo 42% ay u arkeen koror weyn
SEO waxay soo saartaa taraafikada sare iyo heerarka sarrifka badan - 3 bilyan oo qof ayaa baaraya internetka maalin kasta iyagoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah ee raadinta ujeeddooyinka aadka u khuseeya.
SEO waa wax iska caadi ah tartanka maanta - Darajeyntu maahan oo kaliya tilmaame awoodaha isugeyn ee SEO, ee waxay tilmaame u tahay awoodda guud ee shirkaddaada guud ahaan shirkaddaada.
SEO waxay u adeegtaa suuqa mobilada - 50% raadinta moobiilka maxalliga ah waxay horseed u tahay booqasho dukaan
SEO weligiis wuu isbeddelayaa sidoo kalena fursadihiisu waa sidaas - Mashiinnada raadintu waxay sii wadaan inay hagaajiyaan algorithms-kooda oo ay shakhsiyeeyaan oo ay jaangooyaan natiijooyinka si loo kordhiyo khibrada macaamiisha. SEO maahan wax adiga do, waxay u baahan tahay feejignaan isdaba-joog ah si loola socdo labadaba isbeddelka mashiinka raadinta iyo dadaallada ka imanaya wada-hawlgalayaashaada.
ROI ee SEO
Waxa ugu horreeya ee laga xusuusto dib-u-soo-celinta maalgashiga SEO ayaa ah inay isbeddelayso waqti ka dib. Haddii aad sii wado hagaajinta oo aad soo saarto waxyaabo la yaab leh, soo noqoshada maal-gashigu way sii kordheysaa waqti ka dib. Tusaale ahaan, waxaad soo saareysaa infographic ku saabsan xilli tartan aad u sarreeya maalgashiguna waa $ 10,000 cilmi baaris, naqshadeyn, iyo dhiirrigelin. Bishii ugu horreysa, waxaad fulisaa ololaha waxaadna heleysaa dhowr tilmaam oo laga yaabee xitaa hal beddelid oo leh qiimo dhan $ 1,000 faa'iido ROI-gaagu waa foorara.
Laakiin ololaha ayaan wali gaarin soo noqoshadiisii ​​ugu badneyd. Bisha labaad iyo seddexaad, macluumaadka xog-uruurinta waxaa loo dejiyaa degello internetyo badan oo awood sare leh waxaana lagu daabacay lamaane. Dhibcaha la helay waxay kordhineysaa awoodda boggaaga ee mawduuca waxaadna bilaabeysaa inaad darajo sare ku yeelato daraasiin ereyada muhiimka ah bilaha soo socda. Bogagga macluumaadka iyo kuwa la xiriira ama maqaallada ayaa bilaaba inay helaan boqolaal hoggaamiyeyaal leh tobanaan xirmo bil kasta. Hadda waxaad arkaysaa ROI togan. Taasi ROI way sii wadi kartaa inay kordho labada sano ee soo socota.
Waxaan u haynaa hal faahfaahin oo loogu talagalay macmiilka sii wadaya inuu fiiro gaar ah u yeesho toddobo sano ka dib markii ugu horreysay ee uu daabaco! Ma aha in la xuso waxaan u isticmaalnay waxyaabaha ku jira dammaanadda iibka iyo dadaallada kale. ROI ee ku saabsan macluumaadkaas ayaa hadda kumanaan ah!
Tags: faa'iidooyinka seoraadinta dabiiciga ahdarajaynta raadinta dabiiciga ahSEOfaa'iidooyinka seoserp
Waa maxay Saameynta Dib-u-eegista Macaamiisha Internetka ee Ganacsigaaga?